AmaProteas aphinde abukisa ngeSri Lanka, akhala emuka nochungechunge - Impempe
AmaProteas aphinde abukisa ngeSri Lanka, akhala emuka nochungechunge
INingizimu Afrika iphinde yabukisa ngeSri Lanka yabukisa ngeSri Lanka iyibhaxabula ngamawikhethi ayishumi kwiTest yesibili e-Imperial Wanderers Stadium, eGoli, ngoLwesibili ntambama.
AmaProteas awine iTest yokuqala nge-innings nama-run angu-45, eSuperSport Park, eCenturion. Ngokuwina iTest yesibili iqembu lakuleli eliholwa nguQuinton de Kock, ukaputeni, liqinisekise ukuthi lemuka nalo uchungechunge lwemidlalo emibili yamaTest, zaphindela emuva zilambatha izivakashi.
ISri Lanka iyona ewine ithosi ngeSonto yakhetha ukubheka kuqala. Kube yihlazo lodwa abashwibi bamaProteas bezenzela umathanda bethatha amawikhethi sengathi kudlalwa umdlalo weT20. Umdlali oshaye into ecokeme lapha kube ngu-Anrich Nortje othathe amawikhethi ayisithupha.
Bayikhiphe yonke iSri Lanka isenze ama-run angu-157. Umdlali owenze kangcono kwiSri Lanka uKusal Perera oshaye ama-run angu-60.
Ephendula amaProteas kwi-innings yawo yokuqala enze ama-run angu-302 kanti uDean Elgar uhlanganise ama-run angu-127. UVishwa Fernando weSri Lanka uthathe amawikhethi amahlanu kule innings.
Kwi-innings yesibili yeSri Lanka bese kubhoke uLungi Ngidi, othathe amawikhethi amane, noLutho Sipamla, othathe amathathu. Bayikhiphe yonke iSri Lanka isenze ama-run angu-211, nobekuchaza ukuthi iNingizimu Afrika ibidinga ama-run angu-67 ukuze iwine umdlalo, nochungechunge uqobo. U-Aiden Markhram no-Elgar bawashaye bebobabili lawoma-run angu-67.
Emdlalweni yomibili uNortje uthathe amawikhethi angu-11, futhi nguyena othathe amaningi kunabo bonke.
U-Elgar uqokwe njengomdlali ovelele ngokushaya ama-run angu-127 kulo mdlalo. Uthe ujabulile ngokufaka isandla ekuwineni kwamaProteas.
UDe Kock uthe: “Besifuna ukuqala kahle ngemuva kokungabi no-2020 omuhle. Ngichazekile ngabadlali abathile abaphamise izandla, badlala kahle. Kuhle ukubona abashwibi bedlala ngokuzimisela kubandakanya nalabo abangenawo amava. Ngijabule futhi ngikubhekile ukuya ePakistan.”
AmaProteas azolibhekisa ePakistan lapho ezodlala khona amaTest amabili nemidlalo yeT20 emithathu. Umdlalo wokuqala weTest ungoJanuwari 26.
Previous Previous post: URyder ubeyiKaizer Chiefs, kusho uMotaung ngenkakha yaMakhosi esanda kushona
Next Next post: Saziyekela thina ukushaya iSundowns, kusho uPule wePirates